ओफुरोबारे केही जानकारी | Nepali In Japan
ओफुरोबारे केही जानकारी
नुहाउनु जापानी संस्कृतिको एक हिस्सा हो । हुन त ओफुरो तथा ओनसेनहरुका बारेमा धेरै जानकारीहरु हाम्रो ब्लगमा प्रकाशन भैसकेका छन् । शरिरलाई स्वस्थ राख्न र मानशिक थकान कम गर्नका लागि ओफुरो नियमित बस्नु फाइदाजनक हुन्छ । आजको लेखमा ओफुरो, जापानी संस्कृतिमा यसको प्रतीक र घरमा यो कसरी गर्ने भन्नेबारे जानकारी प्रस्तुत गरिएको छ ।
ओफुरो के हो?
ओफुरो नुहाउनका लागि प्रंयोग गरिने जापानी शब्द हो । अन्य राष्ट्रमा नुहाउने प्रकृयालाई स्वास्थ्य र सरसफाइसँग जोडेर हेरिने भएपनि जापानमा भने यो नुहाईसँगै रमाइलोको प्रतीक पनि हो । यसैले पनि जापानी घरमा पश्चिमा राष्ट्रमा भएको भन्दा भिन्दै प्रकारको बाथ टब हुन्छ । यो सानो तर गहिरो हुन्छ । यो निश्चित तापक्रममा पानी भर्ने किसिमको सुविधाका साथ पनि उपलब्ध हुन्छ ।
ओफुरो भन्दा अघि सावर लिनुपर्छ?
ओफुरो नुहाउनुभन्दा पनि आफूलाई आराम दिने प्रकृया भएकाले यहाँ छिर्नु अघि राम्रोसँग नुहाउन आवश्यक छ । तपाइले प्रयोग गरेको पानी परिवारका अन्य सदस्यले पुनः प्रयोग गर्न सकुन् भन्नका लागि पनि ओफुरोमा छिर्नुअघि नुहाउना आवश्यक हुन्छ । यो तातो हुने भएकाले यहाँ प्रवेश गर्दा ध्यान दिन आवश्यक छ ।
घरमा जापानी बाथ कसरी तयार पार्ने ?
जापानी अपार्टमेण्टमा स्वतः बाथ तयार हुने गरि व्यवस्था गरिएको हुन्छ । यसलाई प्रयोग गर्न मात्रै जाने पुग्छ ।
बाथटब सफा गर्ने
सबैभन्दा पहिला बाथ टब सफा गर्नुपर्छ । त्यहाँ पानी खन्याउनुअघि बाथ टब सफा भएको सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ ।
तापक्रम सेट गर्ने
आफ्नो बाथरुममा प्यानल हेर्ने । त्यो अन छैन भने अनटेन बटन थिचेर त्यसलाई अन गर्ने र त्यहाँ दुईओटा देखिने खालका तापक्रम हुनुपर्छ । ふろ設定 वा 風呂設定बाथटबका लागि हो भने अर्को चाहिँ तातोपानीका लागि हो । ४० देखि ४१ डिग्री सेल्सियसमा नुहाउनु राम्रो हुन्छ ।
बाथटबलाई आफ्नो काम गर्न दिने
ओफुरो तयार गर्न बटन थिच्न सकिन्छ । तपाइले बाथटबअनुसार पानीको मात्रा पनि समायोजन गर्न सक्नुहुन्छ । यसका लागि メニュー थिच्नुपर्छ । メニュー बटन थिचेको १५ देखि २० मिनेटपछि तपाइको बाथ तयार हुन्छ । ओफुरोमा हुँदा धेरै तातो वा धेरै चिसो भएमा たし湯थिचेर तातो पानी वा さし水थिचेर चिसो पानी थप्न सकिन्छ ।
यदि तपाइ घरमा एक्लै हुनुहुन्छ र केही नराम्रो अनुभव गर्नुभयो भने कसैलाई कल गर्न पनि सक्नुहुन्छ र 呼出 बटन थिचेर आफू सुरक्षित बन्न सक्नुहुन्छ ।
तपाइले नुहाइसकेपछि यदि तपाइ नुहाउने अन्तिम व्यक्ति होइन भने पानी पोख्नु हुँदैन । बाथटबलाई प्लाष्टिक कभरले छोपेर तातो बनाइराख्नुपर्छ । पसिनाहरु पखाल्न फेरी नुहाउन सकिन्छ ।
Prevमाइ नम्बर कार्डः कार्ड एक फाइदा अनेक
Nextपरमाणु ऊर्जाप्रति जापानीहरुको समर्थन बढ्दै